Iswiidhan iyo Afgaanistaan heshiish kala galay si loo celiyo qaxootiga reer Afgaan | shumis.net
Home » Layaab » Iswiidhan iyo Afgaanistaan heshiish kala galay si loo celiyo qaxootiga reer Afgaan
Iswiidhan iyo Afgaanistaan heshiish kala galay si loo celiyo qaxootiga reer Afgaan
Dowlada Iswiidhan ayaa dhawaan waxaa ay heshiis la gashay dalka Afgaanistaan, heshiis ayaa ujeeddadiisu tahay in dib loo celiyo muwaadiniinta reer Afgaanistaan ee dalkaan looga diiday sharciyadda.
Heshiish-kan ayaa sidoo kale waxaa uu yahay heshiis hordhac u ah qaxooti badan oo dalkaan dib looga celinayo, kuwaas cosigoodii magangalyo la diiday. Wasiirka cadaaladda Morgan Johansson oo la hadlayey idaacadda wararka u faafisay dalka ee Ekot ayaa heshiish-kaasi waxaa uu ku tilmaamay mid wax gal u dowladiisa.
Sarkaal ka socda wasaaradda cadaaladda ayaa dhawaan socdaal u kuuragalid ah waxaa ku tagay Afgaanistaan, halkaas oo xukuumadda Kabul kala hadlay dib u soo celinta qaxootiga reer Afgaanistaan ee sharciyadda loo diiday. Qaxooti gaaraya 7oo (tododdo boqol )oo reer Afgaanistaan, ayaa waaxda socdaalka waxaa ay qorsheeyneeysaa in dhawaan dalka laga musaafuriyo.
Maalintii arbacadda ee toddobadkii hore, ayaa magaaladda Burugseel ee dalka Beljim waxaa qalinka lugu duugay heshiish dib loogu celinayo qaxootiga reer Afgaanistaan. Afghanistan ayaa sidoo kale balan qaatay in ay qaabileyso muwaadiniinteeda loo soo celinayo. Ugu dambeyntiina dalkaan Iswiidhan waxaa ku sugan qaxooti gaaraya 36 000 oo Afgaaniyiin ah, ku waas oo y sugaya in dowladda siiso magangalyo iyo daganaansho.
Title: Iswiidhan iyo Afgaanistaan heshiish kala galay si loo celiyo qaxootiga reer Afgaan
Posted by Unknown, Published at October 09, 2016 and have 0 comments